မြန်မာမှ ဂျပန်သို့ ထရိန်နင် အလုပ် လာလုပ်ချင်ရာဝယ်… Technical Intern Training | Working Friends
မြန်မာမှ ဂျပန်သို့ ထရိန်နင် အလုပ် လာလုပ်ချင်ရာဝယ်… Technical Intern Training
2017年12月25日 2017年12月28日 MJ
မြန်မာမှ ဂျပန်သို့ အလုပ် လာလုပ်ချင်လိုသူများအတွက် ရေးပေးလိုပါတယ်။
ဂျပန်ကို လာတဲ့အခါ နည်းအမျိုးမျိုး၊ ဗီဇာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
အလုပ်ဗီဇာ Engineer/Specialist in Humanities/ International Services
( ကုမ္ပဏီ၊အဖွဲ့အစည်းဝန်ထမ်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်မယ့်သူ၊ ဗီဇာသက်တမ်း ၁နှစ်၊၃နှစ်၊ ၅နှစ်အထိ၊ သက်တမ်းတိုးလို့ရနိုင်)
ထရိန်နင်ဗီဇာ Technical Intern Training
(ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအပြင် စက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်းတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်မယ့်သူ၊ ဗီဇာသက်တမ်း ၃နှစ်၊ သက်တမ်းကုန်သွားရင် ကိုယ့်နိုင်ငံပြန်ရ၊
၃နှစ်ပြီး နိုင်ငံခဏပြန်ပြီး၊ သက်တမ်း၂နှစ်ဆက်တိုးနိုင်။ စုစုပေါင်း ၅နှစ်အထိ ခွင့်ပြုပေး ၊ ၅နှစ်ပြီးလျှင် မိမိနိုင်ငံပြန် အသုံးချ)
ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။ သေချာစုံစမ်းပါ။
ဒီတစ်ခေါက် ဖော်ပြသွားမှာက Trainee
မြန်မာမှ ဂျပန်သို့ ထရိန်နင် အလုပ် လာလုပ်ချင်ရာဝယ်…
ဂျပန်သွားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် မြန်မာပြည်ရှိ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး(ဂျပန်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ) မှာ သတင်းအချက်အလက် ရှာကြပါတယ်။
( ၁ ) သွားမယ့်နိုင်ငံရဲ့ ဘာသာစကားကို မသင်မနေရ သင်ရပါမယ်။
အင်္ဂလိပ်စာရတယ်ပဲ ထားဦး သွားမယ့်နိုင်ငံရဲ့ စကားကတော့ အခြေခံ သိထားရမှာပါ။ မသိရင် ပြဿနာအမျိုးမျိုးပေါ့။
(၂ ) အခြေခံစကား ရသင့်သလောက် ရရန်အတွက်က အနည်းဆုံး စာသင်သက်တမ်း ၃လ မှ ၆လ လိုအပ်ပါမယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့် JLPT ဟုခေါ်သော ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ အဆင့် ၅ ၊အဆင့် ၄ အောင်ထားရင် ကောင်းပါတယ်။
( ၃ ) ထိုသို့ ဂျပန် စာ စကား သင် ကျောင်းမှာပဲ ဂျပန်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေး မိတ်ဆက်ပေးတတ်သောကြောင့် စာသင်လျက်နှင့်ပင် အလုပ်အတွက် လူလာခေါ်တာတွေနှင့် ကြုံပါတယ်။
( ၄ )အလုပ်အင်တာဗျူးတဲ့အခါ ကျောင်းမှ တာဝန်ခံက အလယ်မှ နေပြီး ဘာသာပြန်ပေး၊ မိတ်ဆက်ပေးကာ အင်တာဗျူးတာဝန်ခံဂျပန် နှင့် ကိုင်တိုင်တွေ့ ရပါတယ်။
ဂျပန်စကား အခြေခံပြောတတ်မပြောတတ်နှင့်၊ သူတို့လိုချင်တဲ့ လူပုံစံရှိမရှိ စစ်ဆေးတာပေါ့နော်။
( ၅ ) ဒီလို အလုပ်လာခေါ်တဲ့အခါမှာ အလုပ်အကိုင်ရာထူးအမျိုးမျိုး ပါပဲ။
အသား လှီးဖြတ် ရသော စက်ရုံ၊ ငါးများ ခုတ်ထစ် ရေခဲသေတ္တာ တွင် သိုလှောင်ခြင်း၊
အစားအသောက် စက်ရုံ (မုန့်လုပ်ငန်း)
မွေးမြူရေး စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
( ၆ ) ထရိန်နင်ဗီဇာအတွက် လိုအပ်အရည်အချင်းမှာ
1. အနည်းဆုံး ရှစ်တန်းအထက်၊ ဂျပန်စာ အခြေခံ ပြောတတ်သူ
2. အသက် ၂၀-၃၅ အတွင်း
3. ကိုယ်လက် အင်္ဂါ နှင့် ကျမ်းမာရေး ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
အလုပ်ခန့်မယ့် တာဝန်ခံကလည်း ကိုယ့်အား အစစအရာရာ အရည်အချင်းကြည့်ပြီးမှ လက်ခံသလို၊ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ရည်မှန်းချက်အခိုင်အမာရှိပြီး၊ မိမိလုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် အလုပ်ကို သေချာရွေးချယ်လေ့လာဖို့ လိုပါမယ်နော်။
မိမိလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းက ဘာတွေလဲဘယ်လို လုပ်ငန်းအမျိုးအစားလဲ။
အဘယ့်ကြောင့် ဒီအလုပ်ကို လျှောက်ချင်တာလဲ။
ပိုရ်ျ စိတ်ချစေရန် ကိုယ့်ရှေ့မှ ဂျပန်သွားအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများကို facebook အဆက်အသွယ်အားဖြင့် မေးမြန်း စုံစမ်းလား။
မည်သည့် အလုပ်က ပိုကောင်း မကောင်း စတာတွေကို လေ့လာကြည့်ကြပါ။
ဥပမာ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ထမင်းဗူး စက်ရုံ နှစ်ခု အကြောင်းကို ယှဉ်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း အလုပ်အကိုင် စက်ရုံအလုပ်ရုံ အမျိုးမျိုး ခေါ်ပြီး ၊ထိုလုပ်ငန်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူ (သို့) ကြားခံ အလုပ်ရှာဖွေရေးတာဝန်ခံကိုယ်တိုင် လာရောက်ခေါ်ဆိုလေ့ရှိပါတယ်။
အပေါ်ယံအားဖြင့်တော့ ပင်ပန်းသော အလုပ်နှင့် မပင်ပန်းသော အလုပ် ဖြစ်မည်ကို အားလုံးသိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအလုပ် နှစ်ခုအား သေသေချာချာ အတွင်းကျကျ လေ့လာနိုင်ရန် အနည်းငယ် ရေးပြလိုပါသည်။
ဥပမာ (၁) ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်
2 ဂျပန်စာ စကား ရသော သူ
3. လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိရပြီး၊ အသက်အရွယ်၊ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာ သန်စွမ်းသူ
အိမ်ဆောက်လုပ်ငန်းဆိုရင် ပြင်ပ ရာသီဥတုဒါဏ်ခံရပါတယ်။
ပိုက်၊သံ စတာတွေ ထမ်းကာ အပေါ်ထပ်သို့ပို့ပေးရခြင်းများ လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်က အိမ်ဆောက်တာ တစ်ခုတည်းမဟုတ်။
လမ်းတံတား ဆောက်ခြင်း၊ဖောက်ခြင်း၊မြေတူးခြင်း၊မြေအောက် ပိုက်လိုင်း တူးဖော်ခြင်းစတာတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
မြေတူး၊လမ်းဖောက်၊မြေအောက်ပိုက်လိုင်း ပြင်ဆင်မူ့ တွေဟာလည်း ပင်ပန်းပါတယ်။
ဥပမာ မြေအောက် ပိုက်လိုင်း ပိုက်အဆက်များအား ပစ္စည်းသစ် လဲပေးရသည့်တာဝန် ဆိုလျှင် မြေကြီးတူးဖော်ခြင်း၊ တူးဖော်ပြီးမြေအား ဒယ်ဖြင့် ထိုးကာ မြေပေါ်ကို တင်ပေးရခြင်း။
ထို့သို့ ပြုလုပ်ရာတွင် အလေးအလံမပြီး မြေပေါ်သို့ တင်ပေးတဲ့အတွက် ခါးနာ လက်နာဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အခန့်မသင့်ရင်ဆေးခန်းပြရတာတို့၊ ခါးမနာအောင် ဆေးခါးပါတ်စည်းခြင်းများလည်း လုပ်ရပါတယ်တဲ့။
ဥပမာ(၂) ထမင်းဗူး စက်ရုံ အလုပ်
1. မိန်းကလေးအား အဓိက ထား ရွေးပါတယ်
2. ဂျပန်စာ စကား ရသော သူ
3. လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်ရှိရပြီး၊ အသက်အရွယ်၊ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာ သန့်စွမ်းသူ ဖြစ်ရပါတယ်။
ထမင်းဗူး စက်ရုံ အကြောင်း အကြမ်းမျဉ်းလေ့လာကြည့်ရင်
အဆောက်အဦး အတွင်း အလုပ်ရုံထဲမှာ အလုပ်လုပ်ရသောကြောင့် အပြင် ရာသီဥတုဒါဏ် မခံရပါ။
ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်လောက် မပင်ပန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အလေးအလံမခြင်း၊ ပါဆယ်ထုပ်မတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
အလွန်အမင်းလေးလံတာတွေကိုတော့ စက်ပစ္စည်းအင်အားနဲ့ အရွှေ့အပြောင်း ပြုလုပ်ကြပါတယ်။
ထမင်းဗူးစက်ရုံမှာ ဆိုရင် လုပ်ငန်းတာဝန်အသေးစိတ်ပါတယ်။ ဗူးပြင်ဆင်ရတဲ့တာဝန်၊ ပစ္စည်းထည့်ရတဲ့အလုပ်၊ ထည့်ပြီးရင် ပါကင်ထုပ်၊ ကောင်းမကောင်း စစ်ဆေး၊ အပြီးသတ် ထုတ်ပိုးပြီးသည်အထိ အဆင့်အမျိုးမျိုး အလုပ်တာဝန်အမျိုးမျိုးပေါ့။
အလေးအလံမရတာထက် တစ်နေကုန် အာရုံစူးစိုက်ပြီး သေချာ စစ်ဆေးရပါတယ်တဲ့။ တစ်နေကုန် မတ်တပ်ရပ်နေရတာမျိုး၊ ထိုင်နေရတာမျိုး နှင့် ပစ္စည်းထည့်ရတာမျိုး ပေါ့။
အဲ့တော့ ဂျပန်မလာခင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လည် သုံးသပ်ရမှာက
1. ပထမဦးခြေလှမ်းအစအဖြစ် မည်သည့် ဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းတွင် သွားရောက် ပညာသင်မလဲ။
2. သင်တန်းကျောင်းက သင်ပေးသော စကားက ဂျပန်လူမျိုးတို့နှင့် ပြောဆိုရာမှာ အဓိပ္ပါယ်နားလည် သဘောပေါက်လွယ်လား။
(အခြေခံနားလည်ပြီး၊ ပြောဆိုနိုင်ဖို့နှင့် အလုပ်မှာ အသုံးဝင်တဲ့ စာ၊စကားလေးတွေ များများ သင်ပေးတဲ့ ကျောင်းကို ရွေးချယ်ပါ)
3. စာသင်ရုံ သက်သက် သင်တန်းကျောင်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ပါ တွဲဖွင့်ထားတဲ့ သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်း သေချာ စုံစမ်းပါ။
4. ထို စာသင်ကျောင်းသည် မည်သို့သော အလုပ်ရုံများကို ပို့ပေးတာ များသော ကျောင်းပါလဲ။
(ဥပမာ ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ် တစ်မျိုးတည်းလား။ ထမင်းဗူး စက်ရုံ အလုပ် ရောလား စသဖြင့်ပေါ့ )
(သင်တန်းကျောင်းက တာဝန်ရှိသူတို့၊ သွားဖူးတဲ့သူတို့၊ ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများကို ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ)
6. အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူစုံစမ်းနိုင်တဲ့ လမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ (Facebook, messenger, group တွေမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း စသဖြင့်)
ကဲ ဘယ်အလုပ်ကောင်းလည်းဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားဆုံးဖြစ်ပါနော်။ နောက်ပိုင်းလည်း သင့်တော်သလို ဘယ်လိုလုပ်ငန်းတာဝန်က ဘာတွေလုပ်ရတာလည်း ဆိုတာ ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။သူငယ်ချင်းတို့ အဆင်ပြေပါစေ။
မွနျမာမှ ဂပြနျသို့ အလုပျ လာလုပျခငျြလိုသူမြားအတှကျ ရေးပေးလိုပါတယျ။
ဂပြနျကို လာတဲ့အခါ နညျးအမြိုးမြိုး၊ ဗီဇာအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။
အလုပျဗီဇာ Engineer/Specialist in Humanities/ International Services
( ကုမ်ပဏီ၊အဖှဲ့အစညျးဝနျထမျးအဖွဈလုပျကိုငျမယျ့သူ၊ ဗီဇာသကျတမျး ၁နှဈ၊၃နှဈ၊ ၅နှဈအထိ၊ သကျတမျးတိုးလို့ရနိုငျ)
(ကုမ်ပဏီအဖှဲ့အစညျးအပွငျ စကျရုံအလုပျရုံပိုငျးတာဝနျယူလုပျကိုငျမယျ့သူ၊ ဗီဇာသကျတမျး ၃နှဈ၊ သကျတမျးကုနျသှားရငျ ကိုယျ့နိုငျငံပွနျရ၊
၃နှဈပွီး နိုငျငံခဏပွနျပွီး၊ သကျတမျး၂နှဈဆကျတိုးနိုငျ။ စုစုပေါငျး ၅နှဈအထိ ခှငျ့ပွုပေး ၊ ၅နှဈပွီးလြှငျ မိမိနိုငျငံပွနျ အသုံးခြ)
ဆိုပွီး အမြိုးမြိုးရှိတယျနျော။ သခြောစုံစမျးပါ။
ဒီတဈခေါကျ ဖျောပွသှားမှာက Trainee
မွနျမာမှ ဂပြနျသို့ ထရိနျနငျ အလုပျ လာလုပျခငျြရာဝယျ…
ဂပြနျသှားတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျပွီးရငျ မွနျမာပွညျရှိ ပွညျပအလုပျအကိုငျရှာဖှရေေး(ဂပြနျအလုပျအကိုငျရှာဖှရေေးကုမ်ပဏီ) မှာ သတငျးအခကျြအလကျ ရှာကွပါတယျ။
( ၁ ) သှားမယျ့နိုငျငံရဲ့ ဘာသာစကားကို မသငျမနရေ သငျရပါမယျ။
အင်ျဂလိပျစာရတယျပဲ ထားဦး သှားမယျ့နိုငျငံရဲ့ စကားကတော့ အခွခေံ သိထားရမှာပါ။ မသိရငျ ပွဿနာအမြိုးမြိုးပေါ့။
(၂ ) အခွခေံစကား ရသငျ့သလောကျ ရရနျအတှကျက အနညျးဆုံး စာသငျသကျတမျး ၃လ မှ ၆လ လိုအပျပါမယျ။
တဈနညျးအားဖွငျ့ JLPT ဟုချေါသော ဂပြနျစာအရညျအခငျြးစဈ စာမေးပှဲ အဆငျ့ ၅ ၊အဆငျ့ ၄ အောငျထားရငျ ကောငျးပါတယျ။
( ၃ ) ထိုသို့ ဂပြနျ စာ စကား သငျ ကြောငျးမှာပဲ ဂပြနျအလုပျအကိုငျအခှငျ့အရေး မိတျဆကျပေးတတျသောကွောငျ့ စာသငျလကျြနှငျ့ပငျ အလုပျအတှကျ လူလာချေါတာတှနှေငျ့ ကွုံပါတယျ။
( ၄ )အလုပျအငျတာဗြူးတဲ့အခါ ကြောငျးမှ တာဝနျခံက အလယျမှ နပွေီး ဘာသာပွနျပေး၊ မိတျဆကျပေးကာ အငျတာဗြူးတာဝနျခံဂပြနျ နှငျ့ ကိုငျတိုငျတှေ့ ရပါတယျ။
ဂပြနျစကား အခွခေံပွောတတျမပွောတတျနှငျ့၊ သူတို့လိုခငျြတဲ့ လူပုံစံရှိမရှိ စဈဆေးတာပေါ့နျော။
( ၅ ) ဒီလို အလုပျလာချေါတဲ့အခါမှာ အလုပျအကိုငျရာထူးအမြိုးမြိုး ပါပဲ။
အသား လှီးဖွတျ ရသော စကျရုံ၊ ငါးမြား ခုတျထဈ ရခေဲသတ်ေတာ တှငျ သိုလှောငျခွငျး၊
အစားအသောကျ စကျရုံ (မုနျ့လုပျငနျး)
မှေးမွူရေး စတာတှေ ဖွဈပါတယျ။
( ၆ ) ထရိနျနငျဗီဇာအတှကျ လိုအပျအရညျအခငျြးမှာ
1. အနညျးဆုံး ရှဈတနျးအထကျ၊ ဂပြနျစာ အခွခေံ ပွောတတျသူ
2. အသကျ ၂၀-၃၅ အတှငျး
3. ကိုယျလကျ အင်ျဂါ နှငျ့ ကမျြးမာရေး ပွညျ့စုံသူ ဖွဈရပါမယျ။
အလုပျခနျ့မယျ့ တာဝနျခံကလညျး ကိုယျ့အား အစစအရာရာ အရညျအခငျြးကွညျ့ပွီးမှ လကျခံသလို၊ ကိုယျတိုငျကလညျး ရညျမှနျးခကျြအခိုငျအမာရှိပွီး၊ မိမိလုပျကိုငျနိုငျမယျ့ အလုပျကို သခြောရှေးခယျြလလေ့ာဖို့ လိုပါမယျနျော။
မိမိလုပျနိုငျတဲ့ လုပျငနျးက ဘာတှလေဲဘယျလို လုပျငနျးအမြိုးအစားလဲ။
အဘယျ့ကွောငျ့ ဒီအလုပျကို လြှောကျခငျြတာလဲ။
ပိုရျြ စိတျခစြရေနျ ကိုယျ့ရှမှေ့ ဂပြနျသှားအလုပျလုပျကိုငျသူမြားကို facebook အဆကျအသှယျအားဖွငျ့ မေးမွနျး စုံစမျးလား။
မညျသညျ့ အလုပျက ပိုကောငျး မကောငျး စတာတှကေို လလေ့ာကွညျ့ကွပါ။
ဥပမာ ဆောကျလုပျရေးနှငျ့ ထမငျးဗူး စကျရုံ နှဈခု အကွောငျးကို ယှဉျကွညျ့ကွရအောငျပါ။
အထကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့အတိုငျး အလုပျအကိုငျ စကျရုံအလုပျရုံ အမြိုးမြိုး ချေါပွီး ၊ထိုလုပျငနျးရဲ့ တာဝနျရှိသူ (သို့) ကွားခံ အလုပျရှာဖှရေေးတာဝနျခံကိုယျတိုငျ လာရောကျချေါဆိုလရှေိ့ပါတယျ။
အပျေါယံအားဖွငျ့တော့ ပငျပနျးသော အလုပျနှငျ့ မပငျပနျးသော အလုပျ ဖွဈမညျကို အားလုံးသိကွမညျ ဖွဈပါသညျ။ ဒီအလုပျ နှဈခုအား သသေခြောခြာ အတှငျးကကြ လလေ့ာနိုငျရနျ အနညျးငယျ ရေးပွလိုပါသညျ။
ဥပမာ (၁) ဆောကျလုပျရေး အလုပျ
1. ယောကျြားလေးကိုသာ ရှေးတာမြားပါတယျ
2 ဂပြနျစာ စကား ရသော သူ
3. လုပျနိုငျကိုငျနိုငျရှိရပွီး၊ အသကျအရှယျ၊ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာ သနျစှမျးသူ
အိမျဆောကျလုပျငနျးဆိုရငျ ပွငျပ ရာသီဥတုဒါဏျခံရပါတယျ။
ပိုကျ၊သံ စတာတှေ ထမျးကာ အပျေါထပျသို့ပို့ပေးရခွငျးမြား လုပျကိုငျရပါတယျ။
ဆောကျလုပျရေး အလုပျက အိမျဆောကျတာ တဈခုတညျးမဟုတျ။
လမျးတံတား ဆောကျခွငျး၊ဖောကျခွငျး၊မွတေူးခွငျး၊မွအေောကျ ပိုကျလိုငျး တူးဖျောခွငျးစတာတှေ ပါဝငျပါတယျ။
မွတေူး၊လမျးဖောကျ၊မွအေောကျပိုကျလိုငျး ပွငျဆငျမူ့ တှဟောလညျး ပငျပနျးပါတယျ။
ဥပမာ မွအေောကျ ပိုကျလိုငျး ပိုကျအဆကျမြားအား ပစ်စညျးသဈ လဲပေးရသညျ့တာဝနျ ဆိုလြှငျ မွကွေီးတူးဖျောခွငျး၊ တူးဖျောပွီးမွအေား ဒယျဖွငျ့ ထိုးကာ မွပေျေါကို တငျပေးရခွငျး။
ထို့သို့ ပွုလုပျရာတှငျ အလေးအလံမပွီး မွပေျေါသို့ တငျပေးတဲ့အတှကျ ခါးနာ လကျနာဖွဈတတျပါတယျ။
အခနျ့မသငျ့ရငျဆေးခနျးပွရတာတို့၊ ခါးမနာအောငျ ဆေးခါးပါတျစညျးခွငျးမြားလညျး လုပျရပါတယျတဲ့။
ဥပမာ(၂) ထမငျးဗူး စကျရုံ အလုပျ
1. မိနျးကလေးအား အဓိက ထား ရှေးပါတယျ
2. ဂပြနျစာ စကား ရသော သူ
3. လုပျနိုငျကိုငျနိုငျရှိရပွီး၊ အသကျအရှယျ၊ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာ သနျစှမျးသူ ဖွဈရပါတယျ။
ထမငျးဗူး စကျရုံ အကွောငျး အကွမျးမဉျြးလလေ့ာကွညျ့ရငျ
အဆောကျအဦး အတှငျး အလုပျရုံထဲမှာ အလုပျလုပျရသောကွောငျ့ အပွငျ ရာသီဥတုဒါဏျ မခံရပါ။
ဆောကျလုပျရေး အလုပျလောကျ မပငျပနျးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အလေးအလံမခွငျး၊ ပါဆယျထုပျမတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။
အလှနျအမငျးလေးလံတာတှကေိုတော့ စကျပစ်စညျးအငျအားနဲ့ အရှအေ့ပွောငျး ပွုလုပျကွပါတယျ။
ထမငျးဗူးစကျရုံမှာ ဆိုရငျ လုပျငနျးတာဝနျအသေးစိတျပါတယျ။ ဗူးပွငျဆငျရတဲ့တာဝနျ၊ ပစ်စညျးထညျ့ရတဲ့အလုပျ၊ ထညျ့ပွီးရငျ ပါကငျထုပျ၊ ကောငျးမကောငျး စဈဆေး၊ အပွီးသတျ ထုတျပိုးပွီးသညျအထိ အဆငျ့အမြိုးမြိုး အလုပျတာဝနျအမြိုးမြိုးပေါ့။
အလေးအလံမရတာထကျ တဈနကေုနျ အာရုံစူးစိုကျပွီး သခြော စဈဆေးရပါတယျတဲ့။ တဈနကေုနျ မတျတပျရပျနရေတာမြိုး၊ ထိုငျနရေတာမြိုး နှငျ့ ပစ်စညျးထညျ့ရတာမြိုး ပေါ့။
အဲ့တော့ ဂပြနျမလာခငျ ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျလညျ သုံးသပျရမှာက
1. ပထမဦးခွလှေမျးအစအဖွဈ မညျသညျ့ ဂပြနျစာသငျတနျးကြောငျးတှငျ သှားရောကျ ပညာသငျမလဲ။
2. သငျတနျးကြောငျးက သငျပေးသော စကားက ဂပြနျလူမြိုးတို့နှငျ့ ပွောဆိုရာမှာ အဓိပ်ပါယျနားလညျ သဘောပေါကျလှယျလား။
(အခွခေံနားလညျပွီး၊ ပွောဆိုနိုငျဖို့နှငျ့ အလုပျမှာ အသုံးဝငျတဲ့ စာ၊စကားလေးတှေ မြားမြား သငျပေးတဲ့ ကြောငျးကို ရှေးခယျြပါ)
3. စာသငျရုံ သကျသကျ သငျတနျးကြောငျးနှငျ့ အလုပျအကိုငျပါ တှဲဖှငျ့ထားတဲ့ သငျတနျးကြောငျး ဖွဈမဖွဈကိုလညျး သခြော စုံစမျးပါ။
4. ထို စာသငျကြောငျးသညျ မညျသို့သော အလုပျရုံမြားကို ပို့ပေးတာ မြားသော ကြောငျးပါလဲ။
(ဥပမာ ဆောကျလုပျရေး အလုပျ တဈမြိုးတညျးလား။ ထမငျးဗူး စကျရုံ အလုပျ ရောလား စသဖွငျ့ပေါ့ )
(သငျတနျးကြောငျးက တာဝနျရှိသူတို့၊ သှားဖူးတဲ့သူတို့၊ ဂပြနျမှာ အလုပျလုပျကိုငျနသေူမြားကို ဆကျသှယျကွညျ့ပါ)
6. အငျတာနကျမှာ အလှယျတကူစုံစမျးနိုငျတဲ့ လမျးအမြိုးမြိုးရှိပါတယျ။ (Facebook, messenger, group တှမှော ဝငျရောကျကွညျ့ရှုခွငျး စသဖွငျ့)
ကဲ ဘယျအလုပျကောငျးလညျးဆိုတာ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ စဉျးစားဆုံးဖွတျပါနျော။ နောကျပိုငျးလညျး သငျ့တျောသလို ဘယျလိုလုပျငနျးတာဝနျက ဘာတှလေုပျရတာလညျး ဆိုတာ ဖျောပွပေးသှားပါမယျ။သူငယျခငျြးတို့ အဆငျပွပေါစေ။
Previous Previous post: သူများနှင့်မတူ တစ်မူထူးခြားတဲ့ ဂျပန်ခရစ်စမတ် Big Event
Next Next post: Happy New Year 2018 နှစ်သစ်ကူးဟင်းလျာ